जेडीसीको आवश्यकता मेरो नजरमा : डा. रवीन वस्नेत - Everest Dainik - News from Nepal
जेडीसीको आवश्यकता मेरो नजरमा : डा. रवीन वस्नेत
नेपालका विभिन्न संघ सस्थाहरु विभिन्न कालखण्डको चुनौती र अवसर बाट गुज्रिदै गए, ति सबै संघ सस्थाको श्रीवृद्धि आशातित लक्ष भन्दा असाध्यै न्यून रहेको छ । आपसी अन्तर द्वन्द, सामजस्यपूर्ण उपस्थी र समयानुकुल परिस्थितिको उचित मुल्याकन र तिनको समुचित ब्यबस्थापन नहुनु प्रमुख कारण हुन । यति लामो र गरौबशाली इतिहास बोकेको नेपालको अल्प विकास हुनु विभिन्न संघ सस्थाको अनुत्पादक र समयसापेक्षित गतितिशिलता नहुनु जस्ता पुरातन ब्यबस्थालाइ तोड्दै नेपाल मेडिकल असोसिएसन जस्तो गरिमामए सस्थाले समयमै परिस्कृत भएर नया सोच र उर्जलालाई सम्मान गर्दै उचित स्थान दिनु नितान्त आवश्यक थियो र सोहि अपेक्षा अनुरुप NMA ले आफुलाई अगाडी बढाइरहेको छ । NMA को वृद्धि ,विकास र यहाँ भित्र हुने क्रियाकलापले प्रतक्ष रुपमा आम नेपाली जनताको स्वास्थ्य र राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्र माथिको नीति र नियममा निकै आहम भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रतिको राज्यको उत्तरदायी भूमिकामा NMA को योगदान प्रमुख र निर्णायक हुन्छ त्यसैले परिवर्तित समयलाई यस सस्था न्याय गरिरहेको छ गरिरहने छ। हरेक तह र तप्कामा युवा सहभागिताको प्रत्याभूत गराउन पर्ने हामी युवाहरुको समन्वयकारी कदम हुन पर्दछ।
कुनै पनि संस्थाको प्रगतिमा त्यस संस्था भित्र आबद्द व्यक्तितत्व मुलत: निर्णयक हुन्छ । संस्थाको जीवन भनेकै सस्थामा भएका पहिलो र दोस्रो पुस्ता बिचको सम्बन्ध र पारस्परिक गतिशिलता हो । समयानुकुल निरन्तर परिस्कृत हुदै जानु अग्रजहरु बाट ज्ञान,शिपको विकास गर्नु साथै नविनतम सोच र बिचारलाइ उचित स्थान दिनु कुनै पनि सस्थाको कर्तब्य र प्राथमिकता हुनुपर्छ र त्यसको फलस्वरूप JDC हो । अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो पुस्ता बिचको सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउन , नया पिढीलाइ स्थान दिदै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको आमुल परिवर्तन को निमित्त योगदान दिन , चिकित्सकहरुका समस्या र तिनको उचित समाधान गर्न, चिकित्सकीय मूल्य मान्यता र अनुसाशनलाइ सजिलै प्रबाह गर्न JDC को निर्माण, संचालन र अभ्यास ऐतिहाशिक हुन्छ।
उद्धेस्य र कार्यक्रमका केही प्रारम्भीक परीकल्पना
१ एक र अर्को चिकित्सक बिच सौहाद्रपुर्ण बृजको काम गर्न।
२ चिकित्सकका जनजीविका , वृद्धि ,विकास र बहुआयमिक अत्यावसकिया मागहरुलाई सम्बोधन गर्न ।
३ स्वास्थ्य क्षेत्रको निती नियम बनाउने तप्कामा युवाहरुलाई पुर्याउनको निम्ति उनीहरुलाई परिपक्क बनाउन।
४ चिकित्सकहरुको समुचित परिचालन सहभागिता मा जोड दिएर आम नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवालाई उत्कृष्ठ र सहज पार्न ।
५ विश्वका अन्य JDC हरु संग सामुन्य गरेर Medical interaction and exchange culture स्थापना गर्न ।
६ नया सदस्य बनाउन प्रेरित कार्यक्रम गरि NMA लाइ बलियो र मजबुत सस्था स्थापना मा भूमिका खेल्न ।
८ ख्यातिप्राप्त सिनिएर डाक्टर सा’ब हरु संग काउन्सेलिङ्ग र अन्तर्किया कार्यक्रम हरेक महिना राख्न ।
९ समाजका अन्य सामाजिक व्यक्तित्त्व हरु संग छलफल सम्बद मार्फत चिकित्सक र आम नागरिक बिचको बिग्रदै गएको सम्बन्ध सुधारमा जोड दिन
१० तलब भत्ता, सेवा सुविधा विस्तार , सुरक्षा , समग्र चिकित्सकको ब्यबस्थापन र बिशेसज्ञ जनशक्तिको अनुपात उत्पादन का मुद्दाहरुमा राज्य संग दबाद र सम्बाद गर्न ।
११ रिसर्च गर्न , गराउन तथा रिसर्च समबन्धि कार्यक्रमलाइ थप प्रभाबकारी बनाउन मदत गर्न ।
१२ चरणबद्द अत्यावश्यक र सीपमुलक तालीमहरु गरेर TOT उत्तपादन गर्ने साथै अन्य अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरुको पनि TOT उत्तपादन गर्न ।
१३ देशमा आइपर्ने विभिन्न आपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बिशेस तयारी गर्न ।
१४ निसुल्क हेल्थ क्याम्प देशको विभिन्न ठाउमा गर्ने बिसेस गरि अत्यवसकिय ठाउको पहिचान गरेर संचालन गर्न।
जेडिसीले हालै बंगलादेश देखी रुकुमको डाक्टरको सहभागीता रहेको नेपालकै सम्भावित पहिलो पटक मेडिकल वेबिनार संचालन गरेको छ जुन आफैमा स्वागतयोग्य काम हो। साथै देशकै ठूलो मेडिकल पुस्तकालय र रिडिङ रुमको काम अगाडि बढ्नु र चरणबद्ध तालीमहरुको लागी पहल हुनुले युवा चिकित्सकहरुमा सकारात्मकता फैलाउनुको साथै आशावादी बनाएको छ।
लेखक डा. रवीन वस्नेत शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा कार्यरत चिकित्सक र जीडिसी कमिटि सदस्य हुन्।